काँक्रो खानुका अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ !
शुक्रबार, साउन ८, २०७८ ११:३०
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। यि हुन काँक्रो खानुका अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ ! काँक्रो बाह्रै महिना फल्नेमल मध्येकाे एउटा फल हो । यो स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यसको सलाद बनाउदा पनि उतिकै चोपिलो हुन्छ ।